Dagaal culus oo lagu dilay Sargaal katirsan Al Shabaab * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By A warsame	 On Aug 7, 2017
Ciidamada Milatariga Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee ku sugan gobolka Shabeelaha Dhaxe ayaa xalay duqeyn ku garaacay deegaanka Cali Fooldheere ay gacanta ku hayaan dagaalyahano katirsan Al Shabaab.
Gudoomiyaha Degmada Mahadaay ee Gobolka Shabellaha Dhexe C/laahi Xuseen Maxamed, oo la hadlay Idaacad kutaala Muqdisho ayaa Sheegay in duqeynta lagu dilay sargaal katirsan Xarakada Al Shabaab iyo dagaalyahan kale oo la joogay.
Waxa uu tilmaamay masuulkan in ay heleen xogta in duqeyntaasi uu ku dhintay sargaal katirsan Al Shabaab uusan magaciisa sheegin, waxa uu sidoo kale tilmaamay in ay ku dhaawacmeen tiro kale oo isugu jirta Ajaaniib iyo Soomaali.
”Duqeynta waxaa ku dhintay Sargaal katirsan Al Shabaab iyo nin kale oo askartooda kamid ah, waxaa sidoo kale dhaawacyo looga qaaday deegaankaasi ilaa sadex nin oo ajaaniib ku jiraan” Ayuu yiri Gudoomiyaha Degmada Mahadaay.
Al Shabaab ayaan ka hadlin warkan ku aadan in sargaal kooxdooda katirsanaa lagu dilay Duqeynta ka dhacday Shabeelaha Dhaxe , sidoo kale ma jiro ilo ka madax banaan Gudoomiyaha Mahadaay oo warkan xaqiijiyay.